काँचो केराका औषधिय गुणहरु जानी राख्नुहोस् – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकाँचो केराका औषधिय गुणहरु जानी राख्नुहोस्
काँचो केराका औषधिय गुणहरु जानी राख्नुहोस्
यो त पाकेको केराको कुरा भयो । काँचो केरा पनि कम हितकर छैन । काँचो केरा खाँदा शरीरमा आइरनको पुर्तिमात्र गर्दैन, कयौ रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यस्ता छन्, काँचो केराका फाइदा :
शरीरका लागि पोटासियम निकै आवश्यक छ । तर, पोटासियम सबै खानामा पाइदैन । यही कारण शरीरमा प्रायः पोटासियमको कमी भइरहन्छ । पोटासियमको मुख्य काम हो, शरीर स्फूर्त राख्नु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु । काँचो केरा पोटासियमको भण्डार हो । काँचो केरामा भिटामिन बी ६ तथा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले कोशिकाहरुलाई पोषण प्रदान गर्छ । काँचो केरामा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र आवश्यक स्टार्चले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
मोटो हुनुहुन्छ ? अनाबश्क रुपमा तौल बढेको छ ? काँचो केरा खानुस्, त्यसले तपाइको तौल बढन दिदैन । नियमती रुपमा काँचो केरा खाने हो भने मानिसको पाचनतन्त्र बलीयो हुन्छ र पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पनि पाउँदैन । बोसो जम्न नपाएपछि मोटो हुने चिन्तै रहेन ।
विहान शौचालयमा राम्ररी दिसा निख्रदैन । यसैलाई कब्जीयत भनिन्छ । कब्जीयतका कारण पेटमा विभिन्न रोग लाग्ने गर्छ । यदि तपाइलाई पनि कब्जीयत छ भने काँचो केरा खाइहाल्नुस् । काँचो केराको अचार, तरकारी बनाएर खान सकिन्छ । काँचो केरामा अत्याधिक मात्रामा फाइबर हुन्छ । फाइबर अर्थात रेशायुक्त केराले हाम्रो पेट सफा गर्छ । काँचो केरा खाएपछि शरीरमा विषाक्त जम्न पाउँदैन र विस्तारै कब्जीयतको समस्या समाधान हुँदैजान्छ । काँचो केरा यस्तो क्षारीय भोजन हो, जुन ग्यास्ट्रीकका विरामीका लागि समेत लाभकारी छ ।